Ras al Khaimah | Ebe 5 ndị ​​njem nlegharị anya na ebe nkiri ị ga-eleta
Ras al Khaimah | Ihe Omume Azụmaahịa & Njem Nletaeze 212022-05-23T17:09:46+05:30
Ndị oke ikuku gbara ya gburugburu Ugwu Hajar, Ras Al Khaimah na-bụ UAEEmirate nke ugwu. Site n'ụsọ osimiri ọla edo ya, ahịhịa osisi mangroves, na ọzara terracotta, ruo n'ugwu Hajar dị elu nke dị n'ókè Oman, ọmarịcha ọla a zoro ezo na-enye ahụmịhe Arabian n'ezie. Ọ dị naanị nkeji 45 site na ọdụ ụgbọ elu International Dubai, ọ jikọtara ya nke ọma site na National Highway. Ras Al Khaimah na-enye mmemme njem nlegharị anya dị mfe, ahụmịhe ọdịnala, ebe ntụrụndụ ụwa, na ọzara a na-achọpụtabeghị maka onye nyocha n'ime gị.
Azụmaahịa na Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah abụrụla ebe azụmaahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana akụ na ụba na -aga n'ihu na -agbasawanye ma na -eme nke ọma. Uto abụrụla nke ukwuu na Ras Al Khaimah n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-ebute mpaghara azụmaahịa efu, ebe ntụrụndụ osimiri dị okomoko, mpaghara ebe obibi dị elu, na ụlọ ọrụ ntụrụndụ ọhụrụ. Mpaghara Azụmahịa efu nke Ras Al Khaimah na-agba mbọ ịnye ụlọ ọrụ kachasị ike n'ụwa ohere azụmahịa na-enye nnukwu ego. N'ihi ya, nwekwara boosted akporo MICE na Ras Al Khaimah.
Ebe 5 ndị ​​njem na ebe nkiri ị ga-eleta na Ras Al Khaimah
Banye n'okike wee sonye na mmemme njem na-atọ ụtọ ka ị na-elele ihe ugwu Ras al Khaimah, Desert, Mangroves na Coast ga-enye.
Ogige Ọzara Bedouin Oasis
Chọpụta ụdị ndụ ọzara ochie wee bịaruo okike nso ka ị na-eri nri na-atọ ụtọ. Soro ndị agbụrụ na Bedouin Oasis.
Na ụdị ọrụ dị iche iche, site na ndakpu ala mmiri, ụgbọ mmiri, egwuregwu mmiri, ugbo mmiri, parasaling, na azu, Ras Al Khaimah bụ ebe zuru oke maka egwuregwu mmiri.
National Museum nke Ras Al Khaimah
Maka ileba anya n'ihe mere n'oge gara aga, gaa na ihe ngosi a echekwabara nke ọma n'ime ụlọ nchekwa narị afọ nke 18. E wezụga usoro ethnology a na-emebu, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a bụkwa ebe obibi nke ụfọdụ ọmarịcha arịa.
Ụgbọ elu Jebel Jasi
Ọ bụ Ras Al Khaimah Jebel Jais - ugwu kasị elu na UAE, bụ ụlọ zipline kacha ogologo n'ụwa. Ndị na-achọ mkpali na adrenaline junkies ga-eme njem ọsọ ọsọ ruo 120kph ruo 150kph n'ogo dị mita 1,680 karịa oke osimiri n'elu ugwu Jebel Jais.